Ambongadiny PVC Granules mitambatra tsindrona tsindrona ho an'ny mpanamboatra kiraro sy mpamatsy | INPVC
Density: 1.18-1.35g / cm3
Fampiharana: Akanjo ambony sy faladia
Niorina tamin'ny taona 1993, ny vondrona INPVC dia iray amin'ireo mpanamboatra mpamokatra PVC Compounds sy PVC Granules any China. Manamboatra singa misy kiraro sy kiraro izahay izay ampiasaina amin'ny milina fanindronana tanana sy mitsangana ary milina semi automatique. Ao amin'ny INPVC, manome pellets PVC be dia be izahay izay azo ampiasaina hanamboarana kiraro ambony sy faladiany.
Manolotra fitaovana plastika kiraro kiraro PVC amin'ny fanao isan-karazany sy famolavolana manokana arakaraka ny fangatahan'ny mpanjifa. Izahay dia manana haitao mandroso sy fanampiana manam-pahaizana hampiroborobo ny fitambarana miaraka amina dingana matihanina. Ny maha-mpitaona mpamatsy ny kiraro sy kiraro mpamatsy mpamatsy ary mpanondrana entana dia manome toky izahay fa hatolotra ara-potoana ho eo am-baravarana.
Kamban-tsoavaly PVC Compact:
Manolotra fitaovana milomano miloko sy mangarahara miaraka amin'ny alokaloka sy fananana miloko miloko mialoha amin'ny vidiny mirary izahay. Ny tonon-taolantsika fluorescent ho an'ny Transparent Colored Soles dia tena manintona.
Air rivotra notsofina & sombin-javatraedisiona Fitambarana:
Nahomby isika tamin'ny famolavolana ny Light Weight Air Blown Compound izay miloko mialoha ary tsy maintsy mandeha amin'ny famolavolana endrika fotsiny mba hamoronana vokatra farany. Samy misy ny PVC Compound sy Masterbatch ho an'ny kiraro rivotra notsongaina.
PVC Nitrile (NBR) Fitambarana:
Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana fingotra nitrile (NBR), dia namorona fantsona PVC misy elastika be izahay Fananana, ampiasaina amin'ny fanaovana Gumboots & Safe Boots amin'ny loko sy fananana rehetra. Ny fanamafisana anay manontolo dia ny manome ny mpanjifa ny tsara indrindra amin'ny fitambarana miaraka amin'ny tahan'ny fanitarana marina & mitazona ny toetra ara-batana & ara-teknika sy toetra tsy miova.
Fampiharana Kiraro miakatra sy faladia, kiraro Insole, kiraro tokana, sotan'orana, Gumboots, Wellington Boots,
Flip Flop Sandal, Kiraro misy volony, kiraro biby fiompy, kiraro afrikanina, kiraro mahazatra, kiraro fanatanjahan-tena,
Kiraro vita amin'ny ronono, kiraro miaramila, kiraro orana, Floater, voditongotra, kiraro an-tsekoly, kiraro lamba
Kiraro fiarovana, Vehivavy Belly, Kiraro Ankizy, Kiraro Jelly, Fehin-kibo,
Density ambany. Maivana microcellular
Famaranana ambonin-javatra malefaka
Misy naoty antistatic sy conductive
Isaky ny fanadihadiana tsirairay dia manangona ny takian'ny mpanjifa amin'ny fampiharana, ny hamafiny, ny lokony, ny haavon'ny tontolo iainana ary ny fanovana izahay mba hamolavolana vahaolana miharo volo ho anao. Raha ao amin'ny sehatry ny fanamboarana kiraro sy singa ianao ary mitady mpamokatra matihanina amin'ny Compound Footwear PVC, dia izahay no anarana tadidy.
Teo aloha: Kamban-tànana PVC ho an'ny famokarana kiraro vita amin'ny kiraro matevina sy mena
Manaraka: Kamban-kazo miovaova ho an'ny kiraro biby PET